युट्युबमा भिडियो हेरेर दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान ! – Khabaarpati
March 11, 2021 goodmamLeaveaComment on युट्युबमा भिडियो हेरेर दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान !
यस पछि जब उनले संगीतालाई प्रश्न गरे, उनी डराइन् र भागिन् । विक्रेताले प्रहरीलाई फोन गरी जानकारी दिए । संगीता उनको घरबाट मंगलबार साँझ पक्राउ परेकी हुन् । संगीताको घरबाट दुई लाख र कलर प्रिन्टर र नक्कली मुद्रा फेला पारिएको छ ।
लाखौं पुगेको सुन को मूल्य आज अदभुत तरीकाले यस्तो भयो
युवतीले गरिन् बाँदरसँग अनैतिक कार्य (भिडियो हेर्नुहोस्)